မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: ရက်စက်ပါ့ နာဂစ်ရေ
အဖြစ်အပျက်တွေတော့ ပြန်တောင် မပြောချင်တော့ပါဘူးအိမ်မှာ ခေါင်မိုးမှာတင်ထားတဲ့ စလောင်းပါသွားတယ်အိမ်အတွင်းထဲလဲ ရေတွေဝင်လို့ လှေမ၀ယ်စီးရရုံတမယ်နာဂစ်မွှေလို့ စာမေးပွဲ နှစ်ဘာသာ( 536 ရော 528 ) ပါ မဖြေရဘူးနောက်မှ ပြန်ဖြေရမတဲ့ ရေကတော့ နှစ်ရက်လောက် ဒွတ်ခရောက်သွားတယ် (သုံးခွက်ပဲ quota နဲ့ ချိုးရတာ)ရေ၀ယ်သုံးရတယ်။ ဂျိုးဖြူရေလွှတ်မှ တော်သေးရဲ့ မီးစက်နဲ့ တင်တာရလို့။မီးကတော့ ပျက်နေသေးတယ်။ ဘယ်လောက်ကြာမယ်မှန်းမသိဘူး(ပန်းဘဲတန်းဘက်မြေအောက်လိုင်းရှိတဲ့အိမ်တွေရတယ်လို့တော့ သိတယ်) ဘာပဲပြောပြော ကိုယ့်ထက် ဆိုးတဲ့သူတွေချည်းပဲမို့ စိတ်မကောင်းဘူးဘလော့ဂါသူငယ်ချင်းတွေ အိမ်မှာ နဲနဲ ပျက်စီးတာကလွဲရင် အားလုံး သိပ်မဆိုးဘူးပဲသိရလို့ တော်ပါသေးရဲ့လောလောဆယ် english blog မှာတော့ ပို့စ်နှစ်ခုတင်ထားတယ်။http://melodymaung.myanmarbloggers.org/2008/05/burma-cyclone-ngo-appeals.html http://melodymaung.myanmarbloggers.org/2008/05/cyclone-relief-more-information.htmlမြန်မာဘလော့ဂ်မှာတော့ ဘာတွေပြောရမှန်းကို မသိဘူး ပြောချင်တာလဲ များတယ်လမ်းမတော်မှာနေတော့ မဲကတော့ 24ရက်မှပဲ ပေးရတော့မယ် ရွှေ့သွားပီနေ့လည် နှစ်နာရီက US သဘောင်္ဆိပ်ကမ်းကပ်တယ်လဲ ကြားတယ်( သဘောင်္မှာ စစ်သား ၁၈၀၀ ပါလာတယ် ဟယ်လီကော်ပတာ ၂၃ စင်း မလို့ တကယ် အ၀င်ခံမခံတော့ မသိ)ထိုင်းဘက်က သံရုံးကနေ UN စစ်လေယာဉ် နှစ်စီး ၀င်ပြီးကူမှာကိုလဲ လက်ခံလိုက်ပီပြောတယ်တကယ်လက်ခံတော့မယ်ထင်ပါရဲ့သေချာတော့ သိဘူးဗျ သိတာကတော့ သစ်ပင်တွေပြောင်သလောက်ပဲရန်ကုန်မြို့ကြီး အင်မတန်ပူဦးမှာပနာဂစ်ကြောင့် ပြိုလဲသွားတဲ့ သစ်ပင်ကြီးမျိုးတွေ ပြန်ရဖို့ နောင်ဆယ်နှစ် အနှစ်20များကြာလေဦးမလားဗျာကမ်းနားမှာ ပြိုလဲ ပျက်စီးနစ်မြုတ်နေတဲ့ ဗောတံတားတွေနဲ့ အတူ လူသေတွေမျောပါတာ အီးဟီးးးးး ကြက်သီးထတယ်ဗျ တနေ့ကတော့ တက်နေတဲ့ရေတွေက ရပ်နေတဲ့ ကမ်းနဖူးနဲ့ တစ်ထွာပဲ လိုတော့တယ်ဒီနေ့ တော့ သွားမကြည့်ရသေးဘူးညဖက်လဲ ထွက်ရဲဘူးလေ မှောင်မည်းနေတော့ ကြောက်သကွဲ့တက်လိုက်တဲ့ ကုန်ဈေးနှုံးကတော့ ဒုံးပျံစီးသွားသလားမှတ်ရဆိုသလိုပဲ အော် လူဖြစ်ရတဲ့ ဒုက္ခ................(ဘုန်းဘုန်းတွေ ဆီက စီးတဲ့သွေးတွေ ဆေးသွားသလားမသိဘူး နာဂစ်ရေ)စက်ရပ်သတင်းကတော့ စင်ကာပူမှာ နောက်ထပ် မုန်တိုင်းတလုံး ABC ဆိုပဲ ၀င်ဦးမတဲ့ နောက် နာရီ ၈၀အတွင်းဆိုပီး မတ်စိတွေ ပလူပျံနေသတဲ့ ဟုတ်ချင်မှတော့ ဟုတ်ပေမပေါ့ http://www.narinjara.com/details.asp?id=1731ဘာပဲပြောပြော အရင်ဝင်တဲ့ သူပုန်က အကုန် သောင်းကျန်းသွားပီးမလို့ နောက်ဝင်မဲ့ သူပုန်ကိုတော့ သနားတယ် ၀င်ချင်ရင်လဲ အပျက်အစီးတွေနဲ့ အခွန်ပဲ ရမအေ့ဖြစ်ပြီးတာတွေတော့ မတတ်နိုင်ဘူး။ ရှေ့ဆက် တို့တွေ(အထူးသဖြင့် ရန်ကုန်ဘလော့ဂါတွေစုပြီးတော့ပေါ့) ဘယ်လို ကူညီရမလဲ ပြင်ဆင်ဆဲ.......၀တ်လက်စ အ၀တ်ဟောင်းတွေနဲ့ စောင်၊ ခြင်ထောင်တွေတော့ ကုန်ပီ အဟိဟိ အနားနီးလို့ သတင်းသိရတဲ့သူတွေ လာလို့ ထည့်ပေးလိုက်တာလေ(မဖြစ်စလောက်လေးပါလေ သူများကိုလဲ သနားတယ် တက်သွားတဲ့ ကုန်ဈေးနှုံးကြောင့် အနော့မှာလဲ ပိုက်ပိုက် အများကြီးချိတော့ဘူး) သတင်းမှာဖတ်ရလို့ နိုင်ငံတကာက လာတဲ့ အကူအညီတွေကတော့ အားရစရာပါပဲဒါပေသိ ထုံးစံအတိုင်း တ၀က်စားတွေ မလုပ်ကြစေချင်ဘူးဗျို(ဘေးဒုက္ခသည်တွေကို တကယ့် သွေးသားရင်းလို ကိုယ်ချင်းစာပြီးတော့ပေါ့)လောလောဆယ် အိမ်က လိုင်းဖုန်းရော ဆတ်စလူးရော ပျက်နေပီ ဘယ်သူ့မှ ဆက်သွယ်လို့ ရသေးဘူး ငုတ်တုတ်ထိုင်နေပါတယ်ဗျိုးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးမုန်တိုင်းဗဟိုထိတဲ့ ဘိုကလေးဘက်ကလူတွေတော့ မသေလို့ ပြန်တွေ့ရတာ သိန်းထီပေါက်သလောက် ၀မ်းမြောက်ပါ၏မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံး (ရန်သူမျိုးငါးပါးလုံးရဲ့ )ဘေးဒုက္ခတွေ မြန်မြန်ဝေးရပါစေဗျာ........ Gepostet von
Hi, It's not true about the news of another cyclone. please check my blog @ concerning with another cyclone in details.As for the news about US ships docking at Yangon ports, it's most possibly not true.The US ships nearest to Myanmar so far are waiting at Myanmar-Thai border for permission to come in.
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သိပ်မဆိုးဘူးဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ် ကျွန်တော့် လမ်းမတော်က အိမ်လဲ ရေ ဒုက္ခလောက်တော့ ရှိနေသေးတာပေါ့ မီးကတော့ အထူး ပြောစရာ မလိုပါဘူး သိပ် မထူး :)